Ugogo (70) udlwengulwe phambi kwabazukulu | Isolezwe
Ugogo (70) udlwengulwe phambi kwabazukulu
Isolezwe / 12 September 2012, 11:22am /
11/09/12 DURBAN: YILO lelilitshe ugogo athi ubesakazwa kulo ngeqolo nangesiphundu ngesikhathi edlwengulwa. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
ESIKHATHINI esiyizinyanga ezimbili ezedlule sekudlwengulwe ogogo abane ezigamekweni ezihlukene KwaZulu-Natal. Isigameko sakamuva ngesayizolo ezintatha eMandeni lapho kudlwengulwe khona ugogo oneminyaka engu-70 kubuka abazukulu bakhe.
Ezinyangeni ezimbili ezedlule izalukazi ezimbili ezineminyaka engu-94 no-84 zidlwenguliwe KwaSwayimani ezehlakalweni ezahlukene kwaboshwa owesilisa namanje osagqunywe ejele njengoba icala lakhe lisaqhubeka.
Izolo kuboshwe owesilisa oneminyaka engu-35 osolwa ngokudlwengula isalukazi ephindelela kubuka abazukulu baso abathathu okukhona kubo nokhubazekile. Umsolwa kuthiwa ubesefuna ukumdlwengula nalo mzukulu okhubazekile.
Lo gogo wasesigodini saseMantungweni ohlala nalezi zingane ezineminyaka engu-21, eyisikhombisa nenonyaka owodwa, uthi into emvelele uyoyixoxela amagwababa echobana njengoba umsolwa eze waphumula eqeda ukumdlwengula okokuqala waphinda ngezintathakusa.
Lo wesilisa kuthiwa uboshwe khona izolo ngemuva kokuhlasele lesi salukazi endlini yaso yamapulangwe nafike waqala ngokufuna umali.
Okhulumela amaphoyisa, uCaptain Thulani Zwane, uthe umsolwa uzovela maduzane enkantolo yeMantshi eShowe.
Ngokusho kwalesi salukazi, umsolwa ufike wabangqongqozela belele ngezithuba zaphakathi kwamabili ebaphoqa ukuthi bavule umnyango.
“Ngemuva kokungikhombisa ummese ngivele ngavula, wathi angikhiphe imali, ngamtshela ukuthi anginayo, wathi angisondele kuye,” kusho lo gogo.
Uthe ngemuva kwalokho ube esekhumula ibhulukwe lakhe umsolwa wagibela phezu kwakhe kubuka abazukulu bakhe akade sebethukile bengakwazi nokumlwela.
“Ngesikhathi esebuya okwesibili ungibuze ukuthi abazukulu bami abafana noma amantombazane, ngamtshela ukuthi amantombazane baseyizingane futhi khona nokhubazekile kubo. Ngemuva kwalokho ube esengikhiphela phandle wangikhomba ngommese wangilalisa etsheni la ngicishe ngafa khona njengoba engishaye kabuhlungu wangiphinda futhi wangidlwengula,” kusho yena.
Uthi uze wasizwa yinja yakwamakhelwane okuyiyo ekhonkothile nokugcine ngokuthi umsolwa ahambe, wabanjwa ngamaphoyisa.
Omakhelwane bathi unina kamsolwa usehlulekile nguyena njengoba ngesonto eledlule ucishe washisa ingane kadadewabo ngamanzi abilayo efuna imali.
Kwezinye izigameko ezifuze lezi, eMngungundllvu kwatholakala isalukazi esineminyaka engu-74 esahamba siya emtholampilo sibulewe sadlwengulwa.
Ngemuva kwalokho kwaphinde kwadlwengulwa esinye esineminyaka engu-78 sabulawa oThukela. Esinye esineminyaka engu-65 eXobho sadlwengulwa wumfana oneminyaka engu-17.
Amacala okudlwengulwa kwalabo gogo wonke asezinkantolo kodwa akekho osagwetshiwe.